ဤ MOOC သည် သုတေသနမှတဆင့် ခရီးတစ်ခုအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ပြင်သစ်တွင် ၎င်း၏ ကွဲပြားသော အသွင်အပြင်များနှင့် ဆက်စပ်သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများအတွက် သုတေသနကို တင်ဆက်သည်။.
ဂျာနယ်လစ် Caroline Béhague ၏ခြေရာအတိုင်း၊ သင့်အား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများ၊ လူသားနှင့် လူမှုရေးသိပ္ပံ၊ ဥပဒေနှင့် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊
ဦးတည်ရာတစ်ခုစီတွင်၊ သုတေသနဂေဟစနစ်နှင့် ၎င်း၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများကို အကောင်းဆုံးသိရှိသူများ- သုတေသီများနှင့် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့များကို တွေ့ဆုံပါမည်။
CES အင်တာဗျူး ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးစဉ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများအား အပ်နှင်းထားသည့်မေးခွန်းများကို မေးရန်အခွင့်အရေးဖြစ်သည့်- လှုံ့ဆော်မှုကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တူညီသောဘာသာရပ်အတွက် နှစ်များကို အသုံးချနိုင်ပါသလား။ ဘာမှ ရှာမတွေ့တဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမလဲ။
"ရပ်တန့်ခြင်း" များကိုဖြေရှင်းခြင်း။ cross-cutting အပြင်အဆင်များ (သုတေသီတစ်ဦး၏အရည်အသွေးများ၊ သူ၏နေ့စဉ်ဘဝ၊ သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာထုတ်ဝေမှု) သည်ခရီးကိုပြီးမြောက်လိမ့်မည်။
သုတေသနက သင့်အား ဆွဲဆောင်နိုင်သော်လည်း လိုက်နာရမည့်လမ်းကြောင်းကို သင်သိချင်နေပါက၊ လမ်းညွှန်အကြံပေး Eric Nöel က သင့်အား အကြံဥာဏ်များပေးမည့် "လမ်းညွှန်မှုဆိုင်ရာအချက်များ" သို့ သွားပါ။ သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရောဂျက်ကို တည်ဆောက်ပြီး အတည်ပြုပါ။.
သုတေသန အကြီးအကဲများ၊ သုတေသန ပညာရှင်များ ဒီဇင်ဘာလ 18, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် အခမဲ့၊ Canva ကိုရှာဖွေပါ
အောက်ပါသားကောင်များ- သားကောင်များဆိုင်ရာ နိဒါန်း